The Essence: ‘သုဇာတာ’လို မိန်းကလေး၊၊ ၊၊
Posted by အလင်း စက် at 8:14 PM
punnya July 5, 2011 at 6:39 AM
very good Bhante ! thz for share!
mstint July 5, 2011 at 8:59 PM
ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဟောကြားခဲ့တဲ့ ဇနီး(၇)မျိုးအကြောင်းကို အမျိုးသမီးတိုင်းသိသင့် သိထိုက်သော အကြောင်းအရာလေးပါ ဘုရား။ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။